साउदी अरेबियाका महिलाहरुले पुरुष अभिभावकको अनुमति बिना नै यात्रा गर्न पाउने - VOICE OF NEPAL
१७ श्रावण २०७६, शुक्रबार २२:५२
260 ??? ???????
रियाद / साउदी अरेबियाका महिलाहरुले अब पुरुष अभिभावकको अनुमति बिना नै विदेश यात्रा गर्न पाउने भएका छन् । लामो समयदेखि महिलालाई लगाइएको प्रतिबन्धको अन्तर्राष्ट्रिय आलेचनापछि यसको अन्त्य भएको साउदी सरकारले बिहीबार जानकारी दिएको छ ।
राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले नेतृत्व गरेको व्यापक उदारीकरण अभियानको बीचमा यो निर्णय आएको छ । महिलालाई सवारी साधन चलाउने विषयमा विद्यमान प्रतिबन्ध समेत उहाँले खुकुलो बनाउनु भएको थियो ।